Si aad u noolaato ganacsiga aadka u tartamaya waa mid guuleysi ah, lakiin tycoons tiknoolajiyaddan oo kaliya ma badbaadin, way ku soo koraan. Iyadoo on jirto qiimo isku dhafan oo ka badan 1 triljonit dollarit, kuwan billaabay maalgashadaan tiknoolajiyadeed ee madaxabannaan ayaa sii wadi doona liiska dadka ugu taajirsan adduunka.
Laakiin waa kuwee farsamooyinka kasriga ah?
Waa hagaag, dhowr ka mid ah magacyadani waa inay yaqaanaan haddii aad waligaa ku faafisay shabakadda. Qaar ka keset ah, si kastaba ha ahaatee, waa isa cusub oo kor u qaadaya darajooyinka iyaga oo ka faa’iideysanaya warbaahinta bulshada iyo suuqa tiknoolajiyada moobiilka.
6 11. Masayoshi poeg
Bishii Luulyo 2017, Jeff Bezos wuxuu si kooban u garaacay Bill Gates booskiisa si uu u noqdo ninka ugu qanisan adduunka. Agaasimaha iyo aasaasaha Amazon, Bezos wuxuu kufaraxay nasiibkiisa markii uu markii hore soo bandhigay loona beddelay fikirka e-ganacsiga. Markii Amazon uu marka hore bilaabay 1994, wuxuu ka shaqeynayay geerashka gurigiisa Seattle wuxuuna ahaa dukaanka buugta internetka. Tan iyo markaas, shirkadu waxay ku korodhay dhaqanka e-ganacsiga, oo vaha walba ka iibsanaya macaamiisha macaamiisha iyo vaha kasta oo u dhexeeya.
Warshadaha Tiknoolajiyada Sare: Miisaaniyada 81,7
Reaalajas Net Miisaaniyad: 94,8 dollarit Miljanit
Larry Ellison ayaa aasaasay Oracle Corp, oo ah shirkad barnaamijka ah, oo ku soo laabtay 1977 laba qof oo lehtkapsast. Shirkadda ayaa inta badan ka faa’iideysatay mashaariicda CIA-da iyo horumarinta software kaas oo gacan ka geysanaya macluumaadka macaamiisha xiriirka macaamiisha xiriirka macaamiisha. Ellison wuxuu booskiisa u dhiibay 2014 laakiin waxa uu sii ahaanayaa gudoomiyaha guddiga iyo madaxa tiknoolajiyadda ee Oracle.
Warshadaha Tiknoolajiyada Sare: Miisaaniyada 59,3
Miisaaniyad reaalajas: 60,1 miljonit dollarit
Doorka hadda jira: Madaxa tähestik
La qaybso Larry Page, Sergey Brin ayaa Google galay shirkadda in the tahay maanta. Brin wuxuu fure u ahaa fududeynta dib u dhiska Google ee 2015, oo ah shirkadda raadiyaha raadinta ee hoosta ku haysa shirkadda haynta ee Alphabet. Iyadoo loo marayo Tähestik, wuxuu sii wadaa inuu sahamiyo mashaariicda "kuuvarjutus" cusub iyo fikradaha sida samaynta guryaha baabuurta lehm iyo baabuurta iskiis u wadida.
Reaalajas Net Miisaaniyad: 47,3 dollarit Milyan
Insener Ma Huateng (ama Pony Ma) ayaa ku howlan warshadda tiknoolajiyada markii uu aasaasay Tencent Holdings, oo ah shirkadda ugu weyn ee Hiina ee 1998. Qaar ka mid ah ganacsiyada guuleysiga ah ee uu sameeyay Tencent Holdings waxaa ka mid ah "QQ", adeegga degdegga ah; Wechat, adeegga moobiilka oo ay la socdaan dadka isticmaala 900 miljonit; iyo Cayaaraha Tencent, oo ah bulshada ugu wayn ee ciyaaraha internetka ee Shiinaha.
Reaalajas Net Miisaaniyad: 43,3 dollarit Milyan
Aasaasaha shirkadda kumbuyuutarka oo magaciisa la yidhaa, Michael Dell wuxuu leeyahay awood badan oo uu ka helay Dell Technologies. Isku duubka Dell oo leh boorsada keydka kombuyuutarka ee EMC ayaa horseedaya helitaanka tiknoolajiyada ugu weyn ee abid soo martay iyada oo lagu qiyaasay qiimihiisu yahay $ 60. Wuxuu sii wadaa inuu xoojiyo saamiga uudo shujakadee 70 ee.
Reaalajas Net Miisaaniyad: 23,5 dollarit Miljanit
11. Masayoshi poeg
Elon Musk wuxuu calaamad u ahaa ganacsigii tiknoolajiga markii uu aasaasay PayPal, oo markii dambe lagu soo iibsaday eBay $ 1.4 ee ee 2002. Waxa uu sii waday inuu dhiso Tesla Motors, oo diiradda saaraaya soo saarista gawaarida si kos, si buuxda sakad qamriga ee Musk ee lagu qiimeeyo 20 dollarit.
Warshadaha Tiknoolajiyada Sare: Miisaaniyada 20,7
Reaalajas Net Miisaaniyad: 19,7 dollarit Milyan
Guddoomiyaha Samsung Electronics Lee Kun-Hee ayaa sameeyey liiska inkastoo sanadihii ugu dambeeyay. Lee wuxuu ku dhacay cudurka wadnaha ee 2014 waxaana lagu seexiyay isbitaal ku yaala Seoul Medical Medical Center halka wiilkiisa, Jay Y., oo la xiray, lagu soo eedeeyay, iyo xabsi ku jira laaluushka 2017. Inkastoo hhaogaakaa, haigkakt ee suuqa moobiilka iyada oo isticmaalkooda casriga ah.
Warshadaha Tiknoolajiyada Sare: Miisaaniyada 18,3
Reaalajas Net Miisaaniyad: 21,7 dollarit Milyan
Doorka hadda jira: asutaja / Maamulaha Netease
Reaalajas netisaade Miisaaniyad: $ 18 Milyan
Shiv Nadar wuxuu hormood ka ahaa ganacsiga IT-da India markii uu helay HCL 1976. Nadar wuxuu bilaabay samaynta xisaabiyeyaasha iyo microprocors-ka geerashiisa, dabadeedna lagu sii ballaariyey adeegyada software-ka. HCL Technologies sai varasema tarkvara kasutuselevõtu korral hindiya iyada oo lagu qiyaaso dakhliga ku baxa 7,5 dollarit.
Warshadaha Tiknoolajiyada Sare: Miisaaniyada 13,5
Reaalajas Net Miisaaniyad: 13,4 dollarit Miljan
Shaqaalihii hore ee IBM Hasso Plattner ayaa ka tagay 1972 iyada oo far qof oo kale a u u bandhigeen SAP (Tarkvara, Applications, Products), shirkad software software oo Jarmal ah. SAP waxay soo saartaa dakhli sanadle ah oo ka badan $ 20 bilyan oo doolar waana hoggaamiye suuqa B2B. Plattner ayaa hoos u dhigay sidii tegevjuht aastal 2003 oo wuxuu sii ahaanayaa gudoomiyaha guddiga kormeerka SAP.
Warshadaha Tiknoolajiyada Sare: Miisaaniyada 12,6
Reaalajas Net Miisaaniyad: 13,3 dollarit Miljan
Reaalajas Net Miisaaniyad: 13,5 dollarit Miljanit
Dietmar Hopp waxay ku biirtay Hasso Plattner iyo asxaabtii hore ee IBM iyagoo bilaabay shirkadda software SAP ee 1972. Hopp wuxuu u shaqeeyay wada-shaqaale ka socda 1988 illaa 1998 kadibna guddoomiyaha kormeerka ilaa 2003. Wuxuu mar dambe, wägau wiii wõi wõi wõi wõi wõi wõi wõi wõi wõi wõi daa wõi wõi wõi wõi wõi wõi wõi wõi daaui daa. wajahan shaqada samafalka ah ee Dietmar Hopp Stiftung, kaas oo u qaybiyay in ka badan $ 470 milyan oo loogu talagalay isboortiska, daawada, waxbarashada iyo barnaamijyada bulshada.
Reaalajas netisaade Miisaaniyad: $ 10,6 Milyan